» टिम सेट गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा, दुवै सचिव फेरिँदै, को को आउँदैछन् ?
टिम सेट गर्दै अर्थमन्त्री शर्मा, दुवै सचिव फेरिँदै, को को आउँदैछन् ?
२०७८ श्रावण २, शनिबार १२:४३
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालयमा नयाँ टिम सेट गर्ने तयारी थालेका छन् । मन्त्री शर्माले स्पिरिट मिल्ने टिम बनाउने भन्दै निकटहरुसँग नयाँ टिमबारे परामर्श थालेका हुन् ।
श्रोतका अनुसार मन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रालयका दुबै सचिव फेर्नेबारे परामर्श गरेका छन् । अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीको ठाउँ अरु सचिव ल्याउने तयारी छ ।
अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई ल्याउने तयारी छ । त्यस्तै, राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीको ठाउँमा भने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई ल्याउने तयारी छ ।
लक्ष्मण अर्यालले पनि अर्थ सचिव बन्नका लागि लबिङ भने गरेका छन् । यस अघि ओली सरकारले राजश्व सचिव बन्न अफर गर्दा अर्यालले अर्थ सचिव नपाए अर्थ मन्त्रालय नजाने अडान कसेका थिए ।